Fandàvana Fanitrihana Am-pàsana Ny Zazakely “rom” Tao Frantsa : Anelanelan’ny Hatezerana Amin’ny Maha-olona Sy Ny Fahabangàn’ny Lalàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Janoary 2015 15:14 GMT
Lapan'ny Tanàna ao Champlan (91), Frantsa – Wikipedia CC-BY-30
Tsy vao voalohany niharan'ny fanavakavahana ny vondrom-piarahamonina “rom” ao Frantsa. Tsy vao voalohany ihany koa, soa ihany, ny fiarahamonina frantsay, na dia ampahany ihany aza aloha, no tohina sy nalahelo. Ny alin'ny 25 hifoha 26 Desambra lasa teo, tao Essonne, tratry ny fahafatesana tampoka mpanjo ny zaza vao teraka i Maria Francesca, ankizivavy kely “rom”. Araka ny nolazain'ilay orinasa mpikarakara razana sy fandevenana natonin'ny fianakaviana, ary araka ny nolazain'ny Fikambanana Firaisankina amin'ireo fianakaviana romàna sy roms ao Essonne (ASEFRR), nolavin'ny ben'ny tanàna avy amin'ny elatra havanana ao Champlan, kaominina misy ny toeram-ponenan'ireto fianakaviana, ny handevenana ilay zazakely ao amin'ny fasam-bahinin'ny kaominina, fialàna olana nataony ny hoe satria tany amin'ny kaominina hafa no natao ny filazana fahafatesana, ary efa feno loatra ny fasam-bahiny ao amin'ny kaominina sahaniny, sy hoe efa voatokana ho an'ireo olom-pirenena mpandoa hetra ny hany sisa toerana tavela.
Naka toerana be teny anivon'ireo fampahalalam-baovao sy ny média sôsialy ny 04 Janoary ilay raharaha navoitran'ny le Parisien, ka nahavoatery an'ingahy ben'ny tanàna hanamarin-tena sy hilaza fa nisy tsy fifankahazoan-kevitra tao. Nalevina ny 05 Janoary tao amin'ny fasam-bahiny tao Wissous ilay zazavavy kely, raha mbola mitohy hatrany kosa ho resaky ny rehetra ilay raharaha. Azo antenaina ve ny handraisana ity raharaha ity ho ny faratampon'ny fanavakavahana? Mba hitondra ireo frantsay manampahefana haka mazava izay tena fanapahankeviny momba ny raharahan'ireo roms ve? Tsy mbola misy azo antoka izany.
Ny twitter ankehitriny no toa lasa sahala amin'ny efitrano fanehoana ny hatezerana rehetra, indrindra fa amin'ny pôlitika (havanana sy havia), manoloana ity raharaha ity. Laurence Rossignol, Sekreteram-panjakàna misahana ny fianakaviana, no minisi-panjakana tezitra voalohany.
Alahelo fantatry ny tontolo izany maty anaka izany. Ny mahita fandàvana fandevenana, ho azy, dia fanimbazimbàna tsy natao ho an'olombelona
Taorian'ireo zava-tsy nety nataony, tsy ela akory izay, tamin'ny vondrompiarahamonina “rom”, tonga niaraka tamin'ny teny maheriny i Manuel Valls, amin'ny andraikiny maha-praiminisitra azy, nilaza fa azo atao tsara na izany aza ny manisy fanavahana/fandinihana.
Ny fandàvana fandevenana zazakely iray noho ny fiaviany : ompa atao amin'ny fahatsiarovana azy, ompa atao an'i Frantsa
Richard Trinquier, ben'ny tanànan'i Wissous, avy amin'ny UMP, izay nanome fàsana iray tao amin'ny kaominina iadidiany vantany vao nisy ny fandàvan'ny ben'ny tanànan'i Champlan, dia mampahatsiahy, fa “resaka maha-olombelona tsotra fotsiny izany”.
Raha toa ireny hatezerana rehetra ireny ka mikaika daholo ny maha-olombelona sy ny fahamendrehana, dia vitsy kosa amin'izy ireny no mba miresaka ny zo sy lalàna. Raha marobe ireo lahatsoratra miresaka ilay olana, tsy misy olona na iray aza mba mijoro hametraka ny adihevitra momba ny zo sy lalàna, satria tahàka ny manjavozavo izy io. Izay mihitsy, araka ny fijoroana vavolombelona ataon'i Julien Guenzi, mpitantana orinasa mpikarakara razana sy fandevenana ao Escarcelle any Corbeil, tanisain'ny Huffington Post :
Nolavin'ny ben'ny tanàna “tsy nasiany fanazavàna na kely aza. Tsy voatery hanamarina ny tenany izy, nefa tena saro-tadiavina ny valinteny tahaka ireny”.
Jacques Toubon, Mpiaro ny Zo, dia nanambara tao amin'ny onjam-peon'ny France Inter hoe :
Amin'ny maha-olombelona, tohina aho, zendana tamin'ilay vaovao. Etsy andaniny koa, amin'ny maha-mpiaro ny zo ahy, ao anatin'ny raharaha tahaka ity dia mila mahazo ny vaovao rehetra aho vao afaka hitsara.
Tena hiondrika tokoa handinika ilay raharaha ve anefa izy? Toa izay aloha no tiany nambara na izany aza e.
Mazava fa misy resaka zo ao anatin'ity raharaha ity.
Nialàn'ireo fikambanana nihevitra hitory an'ingahy ben'ny tanànan'i Champlan aloha ity heviny ity mandra-paha.. satria toa tsy misy fandikàn-dalàna vitany tao anatin'ilay valinteny fandàvana nataony. Na izany aza, toa tsy voalohany ihany koa amin'ny raharaha fanavakavahana nataony tamin'ny vondrom-piarahamonina rom ingahy Christian Leclerc ,araka ny lazain'i Loïc Gandais, filohan'ny ASEFRR. Ny olana araka izany dia tsy mipetraka loatra amin'ny hoe tsy nisy fandikàn-dalàna nataony amin'ity raharaha manokana momba ny fandàvana fandevenana ity, fa matetika loatra ireo fanavakavahana ataon'ireo olomboafidy frantsay amin'ny vondrom-piarahamonina rom mihitsy no midika tsy fandikàn-dalàna.
Toa hita na izany aza, araka ny lazain'ny bilaogin'i Gilles Devers “Les actualités de droit” fa tena “tao anaty fandikan-dalàna tanteraka” ingahy ben'ny tanàna tamin'ity raharaha ity.
Tena nandidy nanàtaka ahy ilay fanapahankevitry ny ben'ny tanànan'i Champlan… ary toy izay koa no ambarako mikasika ny fihetsik'ireo fikambanana izay rariny loatra raha niampanga – « Fanavakavahana io, fankahalàna vahiny ary fanamelohana imasom-bahoaka » – izay avy eo nilaza indray fa tsy hanohy ny fitoriany. Fanomezana tombony ny tsimatimanota izany. « Eo amin'ny lafiny maoraly, tsy azo ekena izany, nefa eo amin'ny lafiny lalàna, tsy dia misy zavatra betsaka azo atao loatra»… Aiza e, Aiza isika e…
Ary novelabelariny tao anatin'ny tohin'ilay lahatsorany ireo fehezan-dalàna rehetra milaza fa tena fandikan-dalàna no nataon’ ingahy ben'ny tanànan'i Champlan. Ary nofintininy hoe :
Amin'ny ankapobeny, tsy maintsy velon-tebiteby ny tena manoloana ireo endrika fakàna an-tendrony haingana loatra ataon'ireo ben'ny tanàna avy amin'ny elatra havanana, ary ny minisitry ny atitany mety mba haka aingam-panahy hanorina foibe fandraisana ny feon'ny olona mba hahafahan'ireo fianakaviana manana ahiahy mitondra fampahafantarana ho an'ny manampahefàna, alohan'ny hirosoana aminà hetsika, izay azo tanterahana vetivety, araka ny nasehon'ity raharaha mahamenatra ity.
Louis de Gouyon Matignon, lehiben'ny Antoko eoropeana sy ny Fikambanana Miaro ny Kolontsaina Tzigane, dia mitantana bilaogy iray ao amin'ny Huffington Post ary matetika miampanga io fanavakavahana ataon'ny fanjakàna io, izay lasa lavitra mihoatra noho ny fanavakavahana tsotra mahazo ny tsirairay.
Raisina ary mihevi-tena ho toy ny olompirenena ve ireo Roms? Efa nandritry ny taona marobe ny olan'ireo vahoaka ireo no hita tany amin'ireo firenena eoropeana Tatsinanana efa mivoatra, sy tany amin'ny firenena niavian-dry zareo. Niniana nahilika ho ivelan'izay rehetra mety ho endrika fampandrosoana ireo vahoaka ireo, ary izany dia, na noho ny antony ara-tantara, na antony noho ny fanavakavahana tsotra izao fotsiny. Ankavitsiana ireo mba afaka mahazo fanabeazana fototra, fanofànana momba ny asa, indrindra fa ny hoe asa raikitra.
Taorian'ny fitsaram-bahoaka natao an'ilay tovolahy rom tamin'ny volana jolay lasa teo, tao Seine Saint Denis, io Louis de Gouyon Matignon io ihany no niampanga mafy ny fanamelohana imasom-bahoaka ataon'ny fanjakàna amin'ny vondrom-piarahamonin'ny rom, nandritry ny tafa iray tao amin'ny fahitalavitra.
Raha raisina tsirairay, ireo tantaranà fitsaram-bahoaka nanjo an'i Gheorghe, ny fandroahana nanjo an'i Leonarda ary ny fandàvana fandevenana tsy ho azon'i Maria Francesca dia mety ho lasa tranga maningantsingana na tantara mampalahelo hita tetsy sy teroa. Ny henatra sy hatezerana tsy mitsaha-mitombo entin'ny tsirairay amin'ireny raharaha ireny, nefa koa ny isa tsy hay intsony amin'ny fanehoankevitra faran'izay mifono fankahalàna sy fitroarana ety anaty aterineto momba ny vondrom-piarahamonina rom, hatramin'ny fomba entina mampifandray ireny raharaha ireny aminà resaka fanjakàna sy olomboafidy, dia toa samy manaporofo fa ireny raharaha ireny dia tsy tantara hita tetsy sy teroa fotsiny. Tendrony kely hita amin'ny vongan-dranomandry mitsingevana ihany izy ireny, kisary mahonena sy mahavaky fo entina anehoana ny fomba fanavakavahana isan'andro an'ireo roms ao anatinà firenena iray izay mandà tsy hanome azy ireo ny zo maha-olompirenena sy maha-olona. Inona no hahagaga amin'ny fanavakavahana tsotra zakain'ireo roms ireo raha toa ka ny mpisehatra pôlitika mihitsy no mandrisika amin'ny fanatanterahana izany? Tsy hanafotra ilay tendron-dranomandry akory raha izay ranomasom-boay nandritry nandro vitsy narotsaka manodidina ilay fandàvan'ny ben'ny tanàna tsy valahara ny fandevenana an'ilay zazavavy kely. Tsy ampy ny hatezeran'olona fotsiny, tsy maintsy apetraka ho ivon'ny fifanakalozan-dresaka ny zo sy lalàna.